အကောင်းဆုံးဥသုပ်စာရွက် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
အဆိုပါ cob ရာသီအပေါ်ပြောင်းဖူးပြုတ်
ကြက်သားဘို့မီးဖိုထိပ်တန်း stuffing ရောနှော
မြေသားအမဲသားနှင့်မုန့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူ nacho သို့ကျဆင်းလာ
The အကောင်းဆုံးဥသုပ်စာရွက် လွယ်ကူသောအကြိုက်ဆုံးပါ အဘယ်အရာကိုမျှထက်ပိုပျော်ပွဲစားပြီးပြည့်စုံသည် ကြက်ဥပြုတ် mayo နှင့် mustard pinch နှင့်ရော။ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်နှင့်အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်နီများနှင့်ရောနှောပါ။
သငျသညျကြက်ဥအသုပ်သားညှပ်ပေါင်မုဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဆလတ်သို့မဟုတ်ကာဗွန်ထုပ်ကိုအသုံးပြုပြီးကျန်းမာကြက်ဥအသုတ်ဖြစ်စေ, ဘာမှ '' အားလုံးအမေရိကန် '' ကြက်ဥအသုပ်ကပြောပါတယ်!
လွယ်ကူသောဝက်သားစွပ်ပြုတ်နှေးကွေး cooker ချက်ပြုတ်နည်းများ
ငါဒီနည်းလမ်းကိုသုံးတယ် ခက်ခဲသောအသားပြုတ်ကြက်ဥ အချိန်တိုင်း။ ၎င်းတို့သည်နူးညံ့သောချက်ပြုတ်ထားသောလူဖြူများနှင့်အညိုရောင်အဝါရောင်အလယ် (မီးခိုးရောင်လက်စွပ်မရှိဘဲ) ထွက်လာသည်။
သူတို့ကိုငါဆူအောင်ဆူအောင်ယူပြီးအပူထဲကနေဖယ်ထုတ်ပြီး ၁၅-၁၇ မိနစ် (ဥကြီးကြီး) ဖုံးအုပ်ထားတယ်။ ရေအေးအောက်တွင်ပြေး။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံကောင်းမွန်စွာသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။
သင့်ဥအသစ်ကလတ်ဆတ်လား။ အကောင်းဆုံးကြက်ဥအသုပ်စာရွက်ကြီးမြတ်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ လတ်ဆတ်သောကြက်ဥများသည်ချက်ပြုတ်ပြီးပိုမိုတောက်ပသည်။ လတ်ဆတ်တဲ့ကြက်ဥတစ်လုံးဟာရေတစ်ခွက်ရဲ့အောက်ဘက်မှာလဲလျောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သူတို့ကနည်းနည်းကြီးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာနစ်မြုပ်နေတုန်းပဲ။ သူတို့သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မျောပါလျှင်ကြက်ဥမစားပါနှင့်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သက်တမ်းကုန်သွားပြီဖြစ်သည်။
Egg Salad Sandwiches ပြုလုပ်ရန်
အဝါရောင်ကိုအချိုမှုန့်လုံးဝချောမွေ့သည်အထိရောနှောပြီးလူဖြူများကိုခေါက်ပါ။ ဒါကအကောင်းဆုံးကြက်ဥအသုပ်စေသည်, ဒါကြောင့်ဒါ creamy ထွက်လာ!
ငါသုံးတယ် ကြက်ဥ slicer အဖြူရောင် slicer ထဲမှာဖြူနေတဲ့လူဖြူတွေကိုခုတ်ဖြတ်ပြီးကြက်ဥကိုလှည့်ပြီးပြန်လှည့်ပါ။ အဆိုပါဖြတ်အမှန်တကယ်အမြန်လုပ်ပါ! ငါသည်လည်းစတော်ဘယ်ရီ, ကီဝီကဲ့သို့သောအခြားအရာများအတွက်ငါ့ဥ slicer ကိုအသုံးပြုပါကလုပ်မှိုဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက်အထူးသဖြင့်ကြီးလှ၏ ကြက်သား Marsala ။
ကြက်ဥပြုတ်, အအေးနှင့်အခွံ။ ထက်ဝက်ပိုင်းဖြတ်ပါ၊ အနှစ်နှင့်အဖြူများကိုဖယ်ရှားပါ။
ကြက်ဥအနှစ်များကိုအရသာရှိရန် mayonnaise, မုန်ညင်း၊ ဆား၊
ကုန်တယ်ကြက်ဥလူဖြူများနှင့်အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ဂရုတစိုက်ရောစပ်ပြီးပေါင်မုန့်၊ အသုပ်တစ်ခု၊
လတ်ဆတ်တဲ့အရသာအတွက်တော့ mashed avocado နဲ့ avocado egg salad အောင်လုပ်ပါ။ အမေရိကန်ဂန္အပေါ်စူပါကျန်းမာယူ!
ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရင်မင်းဆိုလိုတာလား။ ကြက်ဥအသုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဆိုတာပြောဖို့တော်တော်လွယ်ပါတယ်။ ဒါဟာကြဲကြဲနှင့်၎င်း၏တောက်ပသောအရောင်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်! သို့သော်အခွင့်အလမ်းမှာဤဥကြက်သုပ်စာသည်သင်၏အိမ်တွင်ကြာရှည်မနေပါ။
ranch တစ်သင်းလုံးကကစားသမားရောနှောနှင့်အတူ7အလွှာသုပ်
ပုစွန်သုပ် - Croissants အပေါ်အလွန်ကြီးစွာသော
အကောင်းဆုံးအာလူးသုပ်စာရွက် (လွယ်ကူသော) - အရမ်းအရသာရှိတယ်
အကောင်းဆုံးကြက်သားသုပ် - အကောင်းဆုံးအသားညှပ်ပေါင်မုန့်!
ဟာမသုပ် - ကျန်ကြွင်းများအတွက်အကြီး!
Waldorf သုပ် - လတ်ဆတ်သောနှင့် crunchy!
ဂန္ထဝင်တူနာသုပ် - ဆလတ်နှင့်ပေါင်မုန့်ပေါ်တွင်လွယ်ကူစွာချက်ပြုတ်နိုင်သည်။
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၁၀ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်နှစ်ဆယ် မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၄ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson အဘယ်အရာကိုမျှတစ် ဦး creamy ကြက်ဥအသုပ်စာရွက်ထက်ပိုပျော်ပွဲစားပြီးပြည့်စုံသည်မဟုတ်! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၈ ဥ ခက်ခဲပြုတ်နှင့်အအေး
▢½ ခွက် မေonnaise
▢1 ½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မုန်ညင်းစေ့
▢၁ ကြက်သွန်အစိမ်း ပါးလွှာသောအချပ်
▢၁ နံရိုးဟင်းသီးဟင်းရွက် ထုထည်
▢နှစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လတ်ဆတ်သောဇီယာစေ့ ကုန်တယ်
အရွက်များကိုချောမွေ့ပြီးမွှေးသောအထိအရသာရှိရန် mayonnaise, မုန်ညင်း၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်များကိုသုတ်ပေးပါ။
သော့ချက်စာလုံးကြက်ဥအသုပ် သင်တန်းနေ့လည်စာ, သုပ် ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။